Yan Aung: Peekaboo Post နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်...
template ကိုသွားပြီး Edit HTML ကို သွားတော့ ကိုရန်အောင် ပြထားတဲ့ ကုဒ်တွေ မတွေ့လို့ ။
ကုဒ်ဒင်းလေးနဲ့ ပြောင်းထည့်ပေးဖို့ ပြောတာပါ ခင်ဗျာ. အဆင်ပြေပါစေ.
ကျေးဇူးပဲဗျို့... ကိုယ့်ဘလော့ကို သေချာပြန် မကြည့်မိဘူး... saturngod blog မှာ ကိုရန်အောင် သတိပေးထားတာ တွေ့မှပဲ အလုပ်မဖြစ်တာ သိတော့တယ်...
ကိုရန်အောင် တူတူပုန်းပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးပဲ။ ဖြေးဖြေးတူတူပုန်း ဖို့က bvibes.com က ဖိုင်ကိုပဲ သုံးထားသေးတယ်နော်။ အရင်လို traffic ပြဿနာ တက်လာနိုင်လား။
Ramani က ရိုးရိုး တူတူပုန်းပို့စ် အတွက် java script ကိုတော့ ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ။ ဖြေးဖြေးတူတူပုန်းပို့စအတွက် java script ရနိုင်မယ်ထင်လား။ bvibes.com ကို လင့်ပေးထားရတာ သူများ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှုနေရသလိုပဲ။ java script ရရင်တော့ template ထဲ တစ်ခါထဲ ရေးထားလိုက်ချင်တာ။